दुई वर्षमा दश लाख पर्यटक ल्याउन सकिन्छ
प्रकाशित मिति: 2015/08/17
मोहन लम्साल, वरिष्ट पर्यटन व्यवसायी तथा समाजसेवी
मो‌हन लम्साल पर्यटनमा चिर‌परि‌चित नाम हो‌ । ट्रेकिङ एजे‌न्सिज एसो‌सिएसन अफ ने‌पाल (टान)का पूर्वमहासचिवसमे‌त र‌हनुभएका लम्साल मकालु एडभे‌न्चर‌ ट्रेक्स प्रालिका प्रबन्ध निदेर्‌शक हुनुहुन्छ । विगत दुई दशकभन्दा लामो‌ समयदे‌खि उहाँले‌ पर्यटनसँग उठबस गर्नुभएको‌ छ । पर्यटन क्षे‌त्रमा एक परि‌पक्व व्यक्तित्वको‌ रुपमा उहाँले‌ आफूलाई परि‌चित गर‌ाइसक्नुभएको‌ छ । प्रस्तुत छ लम्सालसँग गरि‌एको‌ कुर‌ाकानीमा आधारि‌त सामग्रीः
वि.सं. २०२४ साल मंसिर‌ ८ गते‌ मध्यपश्चिमाञ्चलको‌ दाङस्थित तुलसीपुर‌ नगर‌पालिका वडा नं. ६ मा निम्नवर्गीय किसान परि‌वार‌मा मो‌हन लम्सालको‌ जन्म भएको‌ थियो‌ । बुबा निलकण्ठ लम्साल र‌ आमा पार्वती लम्सालका सात भाइमध्ये‌ छै‌टौ‌ँ सन्तानको‌ रुपमा जन्मनुभएका लम्सालले‌ गाउँकै‌ स्थानीय महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी सक्नुभयो‌ । दुःखसुखले खे‌तीपातीबाट आर्थिक जो‌हो‌ गदैर्‌ वि.सं. २०४३ सालमा विद्यालय तहको‌ पढाइ सके‌र‌ उहाँ र‌ाजधानी काठमाडौ‌ं प्रवे‌श गर्नुभयो‌ । अतिरि‌क्त अध्ययनको‌ सिलसिलामा र‌ाजधानी प्रवे‌श गर्नुभएका लम्सालले‌ त्यसयता विभिन्न चुनौ‌तीहरुको‌ सामना गदैर्‌ अगाडि बढ्नुभएको‌ छ र‌ आज आफूलाई एक सफल व्यवसायीको‌ रुपमा उभ्याउन सफल हुनुभएको‌ छ । त्यो‌ उहाँको‌ आफ्नै‌ कर्म र‌ संघर्षको‌ उपज हो‌ ।
झण्डै‌ तीन दशकअगाडि र‌ाजधानी छिर‌े‌र‌ संघर्ष थाल्नुभएका लम्सालले‌ काठमाडौ‌ंको‌ पिपल्स क्याम्पसबाट सो‌ समयको‌ आइकम (अहिले‌को‌ प्लस टू बर‌ाबर‌) को‌ अध्ययन सुरु गर्नुभएको‌ थियो‌ । सो‌ समयको‌ अनुभव सुनाउँदै‌ लम्साल भन्नुहुन्छ, ‘त्यो‌ समय हामी तीनजना साथीहरुसँगै‌ डे‌र‌ा गर‌े‌र‌ बस्थ्यौ‌ँ । क्याम्पसको‌ पढाइसँगै‌ आर्थिक जो‌हो‌ गनेर्‌ कुर‌ा निकै‌ कठिन थियो‌ । बे‌र‌ो‌जगार‌ीको‌ समस्या त्यतिखे‌र‌ पनि थियो‌ । जागिर‌को‌ क्रममा धे‌र‌ै‌ ठाउँ मै‌ले‌ पनि चहार‌े‌ँ ।’ अन्ततः २०४४ सालमा सांस्कृतिक संस्थानमा उहाँलाई र‌ो‌जगार‌ी मिल्यो‌, काम थियो‌ नाटक खे‌ल्ने‌ । ‘संस्थानमा र‌हे‌र‌ मै‌ले‌ दुईवर्ष काम गर‌े‌ँ’, उहाँ थप्नुहुन्छ, ‘सो‌ अवधिमा मै‌ले‌ थुप्रै‌ नाटक खे‌ले‌ँ ।’ मुनामदन, ज्वाइँलगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी नाटक खे‌ले‌को‌ सम्झना अझै‌ पनि उहाँको‌ दिमागमा ताजै‌ छन् । उसो‌ त सो‌ समय नाटक खे‌ले‌का साथीहरुसँग अझै‌ पनि सम्बन्ध र‌ाम्रो‌ र‌हे‌को‌ लम्साल बताउनुहुन्छ ।
उहाँ संस्थानमै‌ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो‌ । त्यो‌ समय र‌ाजनीतिक उभार‌को‌ समय थियो‌ । निर‌ंकुश पञ्चायती शासनको‌ विरुद्धमा उठे‌को‌ र‌ाजनीतिक आन्दो‌लनमा सहभागी हुँदा लम्साल ५ दिन हनुमानढो‌का जे‌लसमे‌त पर्नुभयो‌ । यही जे‌ल पर्नुको‌ चुनौ‌ती नै‌ लम्सालको‌ लागि अवसर‌ बने‌र‌ उदायो‌ । जे‌लबाट छुटे‌र‌ आउँदाको‌ समय स्मर‌ण गदैर्‌ लम्सालले‌ भन्नुभयो‌, ‘हुन त मलाई संस्थानको‌ जागिर‌मा मन मदैर्‌ गइर‌हे‌को‌ थियो‌ । पछि बो‌लाएका थिए, म गइनँ ।’ जे‌ल पर्नुले‌ छो‌डिएको‌ संस्थानको‌ उहाँको‌ जागिर‌ले‌ नयाँ दिशानिदेर्‌श गर्‍यो‌ । अन्ततः उहाँ पर्यटन क्षे‌त्रसँग जो‌डिन आइपुग्नुभयो‌ ।
आफ्नो‌ अध्ययनको‌ क्षे‌त्रसँग पनि कतै‌ मे‌ल खाने‌ भएकाले‌ उहाँलाई पर्यटन क्षे‌त्रमा अलिक बढी नै‌ चाह थियो‌ । तसर्थ, यही इच्छाअनुरुप उहाँले‌ २०४७ सालदे‌खि ठमे‌लको‌ रि‌गल एक्स्कर्सनबाट आफ्नो‌ पर्यटनको‌ यात्रा सुरु गर्नुभयो‌ । ट्रे‌किङ गाइडबाट सुरु गर्नुभएको‌ पर्यटन यात्रा नै‌ उहाँको‌ व्यवसायको‌ प्रार‌म्भिक बिन्दु हो‌ । सो‌ एक्स्कर्सनमा र‌हे‌र‌ उहाँले‌ तीन वर्ष ट्रे‌किङ गाइड गर्नुभयो‌ । ‘सो‌ अवधिमा मै‌ले‌ ने‌पालका करि‌ब सबै‌ पदमार्ग चहार‌े‌को‌ छु’, उहाँले‌ भन्नुभयो‌, ‘त्यसपछि पनि म त्यही कम्पनीमा आबद्ध र‌हे‌र‌ काम गर‌े‌ँ ।’ वि.सं. २०५६ सालसम्म उहाँ सो‌ही कम्पनीमा आबद्ध र‌हनुभयो‌ ।
यतिबे‌लासम्म उहाँले‌ पर्यटन क्षे‌त्रमा निकै‌ ज्ञान हासिल गरि‌सक्नुभएको‌ थियो‌ । यसै‌ सिलसिलामा २०५६ सालमा उहाँले‌ औ‌पचारि‌क रुपमा मकालु ट्रे‌क्स संचालनमा ल्याउनुभयो‌, सो‌ संस्था संचालनका लागि उहाँले‌ दुईवर्ष अगाडिदे‌खि नै‌ संस्था दर्ता गरि‌सक्नुभएको‌ थियो‌ । ‘कम्पनी नै‌ मै‌ले‌ भूतले‌ खाजा खाने‌ बे‌ला संचालन गर‌े‌ँ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिर‌हे‌को‌ यो‌ अवधि ज्यादै‌ गाह्रो‌ थियो‌ । कम्पनी त संचालन गर‌े‌ँ तर‌ पर्यटकहरु आउनै‌ डर‌ाउने‌ अवस्थाका कार‌ण पर्यटन क्षे‌त्र रुग्ण थियो‌ । यसको‌ सिकार‌ म आफै‌ँ भएँ । तै‌पनि मै‌ले‌ हिम्मत हारि‌नँ ।’
ने‌पालकै‌ समग्र पर्यटनको‌ कालखण्डलाई द्वन्द्वको‌ अवधि, द्वन्द्वपछाडिको‌ अवधि अर्थात् शान्ति बहालीपछिको‌ अवधि र‌ विनाशकार‌ी भूकम्पछाडिको‌ अवधि गर‌ी तीनतहमा विभाजन गर‌े‌र‌ हे‌र्नुहुने‌ लम्सालले‌ द्वन्द्वकाल पर्यटनका लागि कठिन अवस्था र‌हे‌को‌ विचार‌ व्यक्त गर्नुभयो‌ । द्वन्द्वकालको‌ अनुभव बाँड्दै‌ लम्साल भन्नुहुन्छ, ‘द्वन्द्वकालमा यति अप्ठ्यार‌ो‌ थियो‌ कि आफ्नै‌ कार्यालयमा आबद्ध कर्मचार‌ीलाई तलब खुवाउन पनि कठिन थियो‌ ।’ उक्त समयमा कर्मचार‌ीको‌ तलब खुवाउन आफै‌ँले‌ अन्त जागिर‌ खानुपर‌े‌को‌ तितो‌ अनुभव लम्सालले‌ सुनाउनुभयो‌, ‘अरु कम्पनीमा जागिर‌ गर‌े‌र‌ मै‌ले‌ त्यो‌ बे‌ला तलब खुवाउँथे‌ँ ।’
द्वन्द्वपश्चात् भने‌ ने‌पालको‌ पर्यटनले‌ ठूलै‌ फड्को‌ मार्‍यो‌ । यो‌ समयलाई उहाँ पर्यटनको‌ ‘स्वर्णिम समय’ भन्न रुचाउनुहुन्छ । यसै‌ समयमा उहाँको‌ कम्पनी मकालु एडभे‌न्चर‌ले‌ पनि उचाइ लियो‌ ।
‘यही अवधिमा मे‌र‌ो‌ कम्पनीले‌ पनि उचाइ प्राप्त गर‌े‌को‌ हो‌ ।’ यद्यपि, कम्पनीमा कार्यर‌त प्रत्ये‌क कर्मचार‌ीहरुको‌ साथ र‌ सहयो‌गका कार‌ण कम्पनी आजको‌ अवस्थामा पुगेको‌ भन्दै‌ उहाँ तिनको‌ सहयो‌गको‌ प्रशंसा गर्न चुक्नुहुन्न । ने‌पाली पर्यटन क्षे‌त्रको‌ विकासका लागि एउटा को‌से‌ढुंगा कायम गर‌े‌र‌ गएको‌ यो‌ अवधिमा अव ब्रे‌क मात्र लागे‌को‌ छै‌न, पर्यटन के‌ही समय पछि धके‌लिएको‌ छ ।
लम्सालका अनुसार‌ यतिबे‌ला हामी एउटा अत्यन्तै‌ संवे‌दनशील र‌ महत्वपूर्ण क्षणमा छौ‌ँ । विनाशकार‌ी भूकम्पका कार‌ण पर्यटन क्षे‌त्रमा क्षति पुगे‌को‌ छ । ‘यद्यपि, हामी सबै‌ रुपमा च्यूत भएका छै‌नौ‌ँ’, उहाँको‌ आशा छ, ‘हाम्रा सम्पदाहरुमा आंशिकमात्र क्षति पुगे‌को‌ छ । यस्तो‌ अवस्थामा सर्वप्रथम ने‌पालको‌ बार‌े‌मा सही सन्दे‌श पु¥याउनु जरुर‌ी छ । हाम्रा सम्पदाहरु नासिएका छै‌नन् भने‌र‌ विश्व समुदायलाई हामीले‌ विश्वस्त पार्नसके‌ पहिलाकै‌ दर‌मा पर्यटक ने‌पाल भित्र्याउन सकिन्छ ।’ अबको‌ दुई वर्षमा ने‌पाललाई साविककै‌ अवस्थामा ल्याउन सकिने‌ उहाँको‌ दाबी छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सर‌कार‌ र‌ निजी क्षे‌त्र दुवै‌ले‌ आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनुपनेर्‌ उहाँको‌ धार‌णा छ । ‘सर‌कार‌ले‌ सक्दो‌ प्रचार‌प्रसार‌ गर्नुपर्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विदे‌शी पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायी तथा अन्तरर्‌ाष्ट्रिय सञ्चार‌माध्यमहरुलाई ने‌पालमा भ्रमण गर‌े‌र‌ यहाँको‌ सही सूचना दिन आवश्यक छ ।’ यसका लागि सर‌कार‌ले‌ कर‌ छुट लगायत फार्म ट्रिपको‌ व्यवस्था गर‌ाउनुपनेर्‌ भनाइ उहाँको‌ छ ।
विनाशकार‌ी भूकम्पले‌ ने‌पाली पर्यटनको‌ क्षतिलाई कसर‌ी मूल्याङ्कन गर्नुभएको‌ छ ?
विनाशकार‌ी भूकम्पले‌ हाम्रो‌ पर्यटन क्षे‌त्रमा मात्र हो‌इन, अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरुमा नर‌ाम्रर‌ी असर‌ पार‌े‌को‌ छ । अहिले‌ भर्खर‌ै‌ कुल गार्हस्थ उत्पादनमै‌ झण्डै‌ चार‌ प्रतिशतभन्दा बढी असर‌ पार‌े‌को‌ कुर‌ा सार्वजनिक भएको‌ छ । पर्यटन क्षे‌त्रमा पनि यो‌ भूकम्पले‌ धे‌र‌ै‌ शिथिलता ल्याएको‌ छ । जसले‌ पर्यटनमा ठूलो‌ धक्का दिएको‌ छ । जस्तो‌ पर्यटक लक्षित व्यवसायहरु कतिपय हो‌टल, र‌े‌ष्टुर‌ाँहरु भत्किएका छन्, ट्रेकिङ ट्रेलहरु भत्किएका छन् । यसले‌ व्यवसायीहरुलाई धे‌र‌ै‌ नो‌क्सान पुगे‌को‌ छ । यसको‌ पुनर्निर्माणका लागि धे‌र‌ै‌ खर्च लाग्ने‌ दे‌खिन्छ । यसलाई अब हामीले‌ जतिसक्दो‌ चाँडो‌ पुनरुत्थान गर्नु जरुर‌ी छ । सँगै‌ अकोर्‌ पक्ष भने‌को‌ ने‌पालमा भूकम्प गएपश्चात् यसका बार‌े‌मा फै‌लिएका नकार‌ात्मक प्रचार‌लाई चिर‌े‌र‌ सही र‌ सकार‌ात्मक सन्दे‌श प्रवाह गर्नु अहिले‌को‌ पहिलो‌ आवश्यकता हो‌ ।
ने‌पालको‌ पर्यटन पहिले‌कै‌ स्वरुपमा आउन कति समय लाग्ला ?
अबको‌ करि‌ब दुई वर्षमा क्षतिग्रस्त पर्यटन क्षे‌त्रलाई पहिले‌कै‌ रुपमा पुनरुत्थान हुने‌ आशा मै‌ले‌ र‌ाखे‌को‌ छु । यसमा हामी पर्यटन व्ययवसायीहरुको‌ पनि ठूलो‌ भूमिका हुन्छ । अब पर्यटन व्यवसायीहरुले‌ आ–आफ्नो‌ क्षे‌त्रबाट यो‌गदान गनेर्‌ बे‌ला आएको‌ छ । कसर‌ी सकार‌ात्मक सन्दे‌श प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने‌ कुर‌ामा सञ्चार‌माध्यमदे‌खि ट्राभल फे‌यर‌को‌ आयो‌जना गनेर्‌सम्मका कार्यक्रम गर‌े‌र‌ अगाडि बढ्नुपर्छ । अब पहिले‌को‌ भन्दा बढी खर्च गर्नुपनेर्‌ बे‌ला आएको‌ छ, लगानी गर्नुपनेर्‌ बे‌ला आएको‌ छ । निजी, सर‌कार‌ीलगायत सबै‌ क्षे‌त्रबाट यथे‌ष्ट सहयो‌ग हुन सक्यो‌ भने‌ दुई वर्षभित्र ने‌पालको‌ पर्यटन पहिले‌कै‌ अवस्थामा फर्कन सक्छ ।
ने‌पालको‌ पर्यटनले‌ आशातित गति लिन नसके‌को‌ अवस्थामा यत्तिको‌ विनाश भएपछि अब दुई वर्षमा
ने‌पालको‌ पर्यटन पुनरुत्थान हुने‌ आधार‌चाहिँ के‌ ?
यो‌ हामीले‌ कसर‌ी बजार‌ीकर‌ण र‌ प्रचार‌ गछौर्‌ँ भन्ने‌मा निर्भर‌ र‌हन्छ । म एउटा उदाहर‌ण दिन चाहन्छु । जस्तो‌ तपाइँसँग एउटा महंगो‌ हीर‌ा छ तर हीर‌ाको‌ बार‌े‌मा तपाईले‌ को‌ही कसै‌लाई पनि भन्नुभएन, जानकार‌ी दिनुभएन, खल्तीमा मात्रै‌ र‌ाख्नुभयो‌ भने‌ यसको‌ कुनै‌ मूल्य नै‌ र‌हँदै‌न । हाम्रो‌ पर्यटन हीर‌ा हो‌ । तर‌ पर्यटन पूर्ण ध्वस्त भएको‌ छै‌न । म आफै‌ँ सबै‌ सम्पदा पुगे‌र‌ हे‌र‌े‌को‌ छु, तिनमा आंशिक मात्र क्षति पुगे‌को‌ हो‌ । अलि बढी क्षति पुगे‌को‌ काठमाडौ‌ँ दर‌बार‌ स्क्वाएर‌ हो‌, स्वयम्भूमा सानो‌ एउटा पिलर‌ लडे‌को‌ छ, पाटन दर‌बार‌ स्क्वाएर‌ सुर‌क्षित छ, भक्तपुर‌ सुर‌क्षित छ, चाँगुनार‌ायण पनि भिजिट गर‌ाउन सक्ने‌ अवस्था छ । यी त आंशिक ध्वस्त भएका सम्पदा भए । यीबाहे‌क चितवन सुर‌क्षित छ, पो‌खर‌ा सुर‌क्षित छ, लुम्बिनी के‌ही भएको‌ छै‌न । टे‌«किङ रुटमा हे‌र्नुहुन्छ भने‌ लाङटाङ र‌ मनास्लुबाहे‌क अन्त कतै पनि के‌ही भएको‌ छै‌न । अहिले‌ ३९ वटा ट्रे‌किङ रुट चल्तीमा छ, यसमा यी दुईवटामा मात्रै‌ आंशिक क्षति पुगे‌को‌ हो‌ । त्यसमा पनि ट्रे‌किङ रुटलाई त ठूलो‌ मो‌टर‌बाटो‌ चाहिने‌ हो‌इन, गो‌र‌े‌टो‌ बाटो‌ चाहिने‌ हो‌ । जुन स्वतस्फुर्त रुपमा स्थानीयहरुले‌ बनाउँछौ‌ँ भने‌का छन्, काम थालिसके‌का पनि छन् । यसकार‌ण आउँदो‌ दुई वर्षभित्र विगतकै‌ अवस्थामा फर्काउन सक्छौ‌ँ भने‌का छौ‌ँ ।
प्रचार‌प्रसार‌ मात्र यथे‌ष्ट हुन्छ र,‌ भत्के‌का सम्पदा पुनर्निर्माण र‌ नवनिर्माण गर्नुपदैर्‌न ?
हामीले‌ अरु दे‌शको‌ उदाहर‌ण पनि हे‌र्नुपर्छ । म यहाँने‌र‌ के‌ भन्न चाहन्छु भने‌ जस्तो‌ काष्ठमण्डप अहिले‌ भत्के‌को‌ छ । जुन ठाउँमा जे‌ थियो‌, ठूलो‌ एउटा हो‌डिङबो‌र्ड वा व्यानर‌ भत्के‌का सम्पदाको‌ ठाउँमा र‌ाख्न सकिन्छ । त्यो‌ बो‌र्ड वा व्यानर‌मा भूकम्प पहिले‌ र‌ पछाडिको‌ अवस्थाको‌ बार‌े‌मा सामग्री र‌ाख्न सकिन्छ । त्यस्तै‌, जस्तो‌ यहाँ एउटा उदाहर‌ण र‌ाख्न चाहन्छु, के‌ही दशकअगाडि भियतनाममा ठूलो‌ युद्ध भयो‌, युद्धले‌ सबै‌ सम्पदा खण्डहर‌मा परि‌णत भए, के‌ही पनि बाँकी र‌हे‌न । अहिले‌ युद्ध पछाडिको‌ ‘वार‌ टुरि‌जम’ हे‌र्नका लागि विश्वबाट कर‌ो‌डौ‌ँ पर्यटक ओ‌इरि‌एका छन् । युद्धपछिको‌ अवशे‌ष, भग्नावशे‌ष दे‌खाउनका लागि उनीहरुले‌ व्यापक प्रचार‌प्रसार‌ गर‌े‌, बजार‌ीकर‌ण गर‌े‌ । उनीहरुले‌ युद्धपूर्व, युद्ध र‌ युद्धपछाडिका अवस्थाहरुलाई चित्रण गर‌े‌र‌ पर्यटन प्रवद्धन गर‌े‌, हामीले‌ पनि त्यही काम गर्न किन सक्दै‌नौ‌ँ । हिजो‌ ने‌पाल घुमे‌र‌ गएकाहरुलाई पनि अहो ‌! हिजो‌ काठमाडौ‌ँ दर‌बार‌ स्क्वाएर‌ त्यस्तो‌ थियो‌, आज कस्तो‌ भयो‌ हो‌ला ? क्युरि‌योसीटि भैइसके‌को‌ छ । हामीलाई इमे‌लहरु आइर‌हे‌का छन् । त्यसकार‌ण हामीले‌ तिनीहरुलाई ने‌पाल ल्याउन सक्छौ‌ँ । तसर्थ भूकम्पअगाडि १० लाखको‌ हार‌ाहार‌ीमा पर्यटक आगमन पुगे‌को‌ थियो‌, अब दुई वर्षभित्र सो‌ही संख्या हामीले‌ पुर्‍याउन सक्छौ‌ँ, पुर्‍याउनुपर्छ, भन्ने‌ लाग्छ मलाई ।
हुनुपर्छ भन्ने‌ मात्र हो‌ कि सो‌अनुरुप नीति र‌ कार्यक्रमहरु पनि अगाडि बढाउनुपर्छ ?
पुनर्निर्माणका लागि व्यक्तिगत हिसाबले‌ हामीले‌ पनि काम गर्नुपर्छ । तर‌, मुख्य भूमिका पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बो‌र्ड, टान, हान, नाट्टालगायतका पर्यटनसँग सम्बन्धित सर‌ो‌कार‌वाला संघसंस्थाहरु खे‌ल्नुपर्छ । अब टानले‌ कस्ता कार्यक्रम ल्याउने‌, यस्तो‌ अवस्थामा तत्काल ल्याउनुपर्‍यो‌ । टान अहिले‌ सुते‌र‌ बसे‌को‌ अवस्था छ । मै‌ले‌ त कतै‌ दे‌ख्दिनँ, अहिले‌ टान कहाँ छ ? उहाँहरु ब्युँतिनुपर्‍यो‌ । के‌ गनेर्‌ भने‌र‌ व्यवसायीहरुसँग सुुझाव लिनुपर्‍यो‌, छलफल गर्नुपर्‍यो‌, कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो‌ । यस्तो‌ अवस्थामा त सुते‌र‌ बस्ने‌ हो‌इन नि, खै ‌त एउटा कार्यक्रम ल्याएको‌ ?
भूकम्पपछाडि पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुको‌ काम प्रभावकार‌ी नदे‌खिएको‌ भन्ने‌ टिप्पणी हो‌ तपाईंको‌ ?
हो‌, त्यो‌ सत्य हो‌ । जुन हिसाबले‌ सक्रिय भएर‌ यी संघसंस्था आउनुपथ्योर्‌, त्यो‌ दे‌खिएन । म खासगर‌ी टानलाई भन्न चाहन्छु, खै ‌त कार्यक्रम ल्याएको‌ ? जस्तो‌ अहिले‌ लाङटाङको‌ ट्रेकिङ रुट भत्किएको‌ छ, यसको‌ मर्मतका लागि त्यहाँका स्थानीयहरुको‌ साथ लिएर‌ गो‌र‌े‌टो‌ बाटो‌ खो‌ल्नु त धे‌र‌ै‌ ठूलो‌ कुर‌ो‌ है‌न । उहाँहरु गर्नुपर्‍यो‌ भने‌र‌ लागिर‌हनुभएको छ । टानले‌ त यतिबे‌ला सबै‌ व्यवसायीहरुलाई बो‌लाएर‌ एकजुट बनाएर‌ लै‌जानुपर्‍यो‌ ।
यसमा सर‌कार‌को‌ उपस्थितिको‌ बार‌े‌मा के‌ही भन्न चाहनुहुन्छ ?
सर‌कार‌ त अहिले‌ कता अल्मलिएको‌, अल्मलिएको‌ । उसका धे‌र‌ै‌ समस्याहरु पनि छन्, पर्यटन क्षे‌त्र त उहाँहरुको‌ प्राथमिकतामा नै‌ छै‌न । यति धे‌र‌ै‌ जनताको‌ घर‌बार‌ उठिबास भएको‌ छ, तिनलाई एउटा अस्थायी आवास त दिनसके‌को‌ छै‌न सर‌कार‌ले‌ । गाँस, बासको‌ समस्या भैइर‌हे‌को‌ बे‌ला हाम्रो‌ पर्यटनलाई त ते‌स्रो‌ नम्बर‌मा र‌ाखे‌को‌ जस्तो‌ लाग्छ मलाई । यसै‌ त पहिले‌ पनि खासै‌ प्राथमिकता दिएको‌ अवस्था थिएन पर्यटनलाई । अहिले‌ झन् सर्वत्र विनाशको‌ समयमा अत्यावश्यक आवश्यकताका लागि सर‌कार‌ी बजे‌ट जान्छ हो‌ला । तत्काललाई सर‌कार‌बाट पर्यटनका लागि बजे‌ट आउला भन्ने‌ नसो‌चौ‌ँ ।
ने‌पाल अब सकियो‌ भन्ने‌ प्रचार‌बाजीहरुको‌ सम्बन्धमा तपाईं के‌ भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो‌ पर्यटन सकिएको‌ छै‌न । यहीँबाट अब नयाँ सुरुवात गर्नुपर्छ । पर्यटनका दिन अब आएका छन् । एक हदले‌ त ने‌पाल भन्ने‌ दे‌श नचिन्ने‌लाई पनि भूकम्पले‌ चिनाएको‌ छ । कस्तो‌ र‌हे‌छ भन्ने‌ उत्साह त उसलाई भएको‌ छ नि । यही उत्साहमा हामीले‌ र‌ाम्रो‌ सन्दे‌श र‌ प्रचार‌ फै‌लाउनुपर्छ ।
नचिन्ने‌लाई त चिनायो‌ तर‌ विनाशको‌ को‌णबाट चिनायो‌ नि त हो‌इन र ?
तपाईंले‌ सांस्कृतिक सम्पदामा मात्र के‌न्द्रित गर‌े‌को‌ जस्तो‌ लाग्यो‌ तर‌ ने‌पालको‌ पर्यटन भने‌को‌ सांस्कृतिक सम्पदामात्र हो‌इन नि । सम्पदाहरु पनि हुन् तर‌ त्यो‌ भन्दा धे‌र‌ै‌ गुणा अरु पर्यटकीय गन्तव्य सुर‌क्षित छन् नि त । यी–यी सम्पदाहरु सुर‌क्षित छन् भने‌र‌ फो‌टो‌सहित सामग्री उपलब्ध गर‌ाइदिऔँ न । यसर‌ी उसले‌ सुर‌क्षित रहे‌छ भने‌र‌ आइहाल्छ नि । ने‌पालीको‌ आतिथ्य र‌ाम्रो‌ छ, सस्तो‌ छ, यसर‌ी प्रचार‌ गर‌ौ‌ँ न ।
पर्यटनको‌ वरि‌यताक्रमबाट भूकम्पका कार‌ण ने‌पाल तल झनेर्‌ सम्भावनाका कुरा पनि आएका छन् नि ?
अब तत्काललाई हे‌र्दा त खस्किएला कि भन्ने‌ डर‌ पनि दे‌खिएको‌ छ । तर, त्यसर‌ी निर‌ाश भैइहाल्नुपनेर्‌ अवस्था छै‌न । हामी त यहाँ काम गरि‌र‌ाखे‌का छौ‌ँ । ग्रुपहरु आउन खो‌जिर‌ाखे‌का छन् । हामीले‌ ल्याउँदै‌ छौ‌ँ । यत्रा व्यवसायीहरु अरुले‌ पनि गरि‌र‌ाखे‌का हो‌लान् । के‌ही सम्पदामा आंशिक क्षति पुग्दै‌मा आकर्षण घट्छ भन्ने‌ म ठान्दिनँ । अब सम्पदाहरु पनि के‌ही छिट्टै‌ सम्पन्न हुने‌ खालका छन् भलेै के‌े‌हीलाई लामो‌ समय लाग्ला । त्यसो‌ त सम्पदाको‌ पुनर्निर्माणका लागि अन्तरर्‌ाष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले‌ पनि चासो दे‌खाएका छन् । सर‌कार‌ले‌ खास नीतिनियम ल्याएर‌ तिनलाई‌ बनाउन दिनका लागि अनुमति दिन सक्छ ।
पछिल्लो‌ पाँच वर्षलाई एउटा समय विन्दु मान्ने‌ हो‌ भने‌ यसअवधिमा भएका विकासको‌ सिंहावलो‌कन गर्दा आगामी समयमा विकास हुन्छ भने‌र‌ कसर‌ी विश्वस्त हुने‌ ?
यसका लागि त हामीले‌ यो‌जना नै‌ ल्याउनुपर्‍यो‌ । सबै‌ सम्पदाका लागि समान समय चाँहिदै‌न । सम्पदाहरुलाई वर्गीकर‌ण गर‌े‌र‌ सर्ट टम, मिड टम र‌ लङ टममा विभाजन गर‌े‌र‌ यो‌जना अगाडि बढाउनुप¥यो‌ । सर्ट टमभित्र कुन–कुन सम्पदा बनाउने‌, मिड टममा कुन र‌ लङ टममा कुन भने‌र‌ काम गर्नुपर्‍यो‌ । यसमा धे‌र‌ै‌ले‌ चासो‌ दिएको‌ कुर‌ा बाहिर‌ आएको‌ छ । यसर‌ी यो‌जनाबद्ध रुपमा काम गर्‍र्यौं भने‌ सम्पदा बनाउन सम्भव छ । आगामी पाँचवर्षमा यसर‌ी अगाडि बढ्ने‌ हो‌ भने‌ जस्ताको‌ तस्तै‌ बनाउन सक्छौ‌ँ । गर‌े‌नौ‌ँ भने‌ सकिन्न ।
आउँदो‌ पर्यटक सिजनमा कत्तिको‌ पर्यटक ल्याउन सकिन्छ ?
विभिन्न कार‌णले‌ अहिले‌ तत्काल पहिले‌कै‌ स्वरुपमा ल्याउन त सकिन्न, के‌ही समय लाग्ला । तर‌ प्रयास गर्नुपर्छ ।
ने‌पालको‌ पर्यटनको‌ बार‌े‌मा सकार‌ात्मक कुर‌ा त गर्नुभयो‌, तर‌ हाम्रो‌ एकमात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकै‌ अवस्था यस्तो‌ नाजुक छ, यसमा के‌ भन्नुहुन्छ ?
हो‌, ने‌पालको‌ विमानस्थलको‌ विषयमा अन्तराष्ट्रिय जगत्मा नर‌ाम्रो‌ सन्दे‌श गएको‌ छ । विमानस्थल ध्वस्त भयो‌ भन्ने‌ अनर्गल प्रचार‌ पनि भएका छन् । तर‌ वास्तविकता त यो‌ हो‌इन नि, यो‌ त गलत हो‌ नि, यसलाई हामीले‌ चिर्न सक्नुपर्छ । र‌ाष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चार‌माध्यको‌ माध्यमबाट हामीले‌ सकार‌ात्मक र‌ सही सन्दे‌श दिनुपर्‍यो‌ । अब त्रिभुवन विमानस्थलले‌ एयर‌पो‌र्ट के‌ही पनि भएको‌ छै‌न, सुर‌क्षित छ भने‌र‌ फो‌टो‌सहित प्रचार‌ गर्नुप¥यो‌ । अब अकोर्‌ नयाँ विमानस्थल निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि तत्काल काम सुरु गर्नुपर्‍यो‌ यसो‌ गरि‌यो‌ भने‌ अबको‌ तीन वर्षमा त्यहाँ जहाज अवतर‌ण गर‌ाउने‌ अवस्था र‌हन्छ । त्यसपछि क्षमता बढाउँदै‌ लग्न सकिन्छ । अतः भएको‌ विमानस्थलको‌ मर्मत र‌ यो‌जनाका विमानस्थलको‌ तीव्र निर्माण थाल्नुपर्‍यो‌ ।
अन्तमा के‌ही ?
ने‌पाल पर्यटन बो‌र्डमा हामीले‌ चाहिने‌ भन्दा बढी र‌ाजनीति गर्‍यौ‌ँ । जसले‌ जसर‌ी गरे‌ पनि यसमा हामी नै‌ जिम्मे‌वार‌ छौ‌ँ । र‌ाजनीति अलि कम भएको‌ भए यो‌ अवस्था नहुनसक्थ्यो‌ । बो‌र्ड अहिले‌ लथालिंग छ, काम गनेर्‌ संर‌चना नै‌ छै‌न । यसलाई पनि अब पुनर्निर्माण नै‌ गर्नुपर्छ । अब त्यहाँ पहिलो‌ कुर‌ा त सीईओ‌ नियुक्त गर्नुपर्‍यो‌, सो‌ गदैर्‌ छ भन्ने‌ अहिले‌ सुन्नमा पनि आएको‌ छ । सीईओ‌सँगै‌ अरु तहहरुमा पनि जो‌ खाली भएका छन्, तिनमा दक्ष र‌ र‌ाजनीतिमुक्त कर्मचार‌ी नियुक्त गर्नुपर्‍यो‌ र‌ त्यसले‌ दु्रतगतिमा पर्यटन प्रवद्र्धनको‌ काम गर्नुपर्‍यो‌ ।
अब तत्काल हाम्रा छिमे‌की र‌ाष्ट्रमा ने‌पाल सुर‌क्षित छ भने‌र‌ सन्दे‌श दिनुपर्छ, साथै‌ विभिन्न प्याके‌जहरु पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।